Jamaika:Fisaonam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2008 13:11 GMT
Iray volana sy tapany lasa izay dia firenena ravo sy tretrika i Jamaika raha nankalaza ny fandresena azon’ireo mahery fo Olaimpikany. Tamin’ity herinandro ity, dia firenena iray fanina no nisaona tamin’ny nahitàna ny vatana tsy nisy lohan’ilay tovovavy kely Ananda Dean novinavinaina ho eo amin’ny 11 taona eo efa ho herinandro vitsy taty aorian’ny nakana azy an-keriny.
Ity fiafaràna mangidy tamin’ny fitadiavana an’i Dean ity dia tena nampisahotaka tokoa, indrindra fa hoe maherin’ny dimampolo ny ankizy nisy namono tao Jamaika hatramin’ny fiandohan’ny taona, isan’ireny i Aakim Scott, izay hita voatetitetika natao tanaty gony ny vatany. Adolantsento iray no voampanga tamin’ity vono olona mahatsiravina ity
Tohina mafy tokoa toy ireo vahoaka maro ireo mpamaham-bolongana Jamaikana, ka dia nanandratra ny feony ho ré ho fijerena ifotony ny antony mampirongatra be ny herisetra atao amin’ny ankizy tsy ampy taona toy izao. Eny fa na dia talohan’ny nitaterana ny fahitana ny vatana mangatsiakan’i Dean aza, i Kadene Porter tao amin’ny Abeng News Magazine dia nanara-maso akaiky tokoa ny fivoaran’ny raharaha:
25 Septambra, valo andro taorian’ny nanjavonan’i Ananda “Passion” Dean, iraika ambinifolo taona, tao Kingston tanàna fonenany, vondrom-piaraha-monina ao Jamaika. Nitohy ny fikarohana làlina momba azy, andro maromaro taorian’ny nahitàn’ny mpandalo iray ireo fitaovam-pianarany vaovao nariana teo amin’ny Pembroke Hall Avenue, toerana maresaka ao an-drenivohitry ny firenena. Mazava ho azy, niatrika tahotra tsy nisy toy izany izay tsy zakan’ny sain’ny raiamandreny maro ireo raiamandreniny, nefa toa zary lasa zava-mahazatra eran’i Jamaika, manaraka ny sakany sy ny lavany, ny hoe misy ankizy avy mianatra ka tsy mody an-trano amin’ny ora mahazatra. Ny fanjavonan’i Ananda dia isan’izay tena nampitaintaina sy nampivarahontsana indrindra tao amin’ny distrika kely milamina ao Sandside, St Mary, toerana nahitàna ny vatana mangatsiaka voatetitetika an’ankizy 11 taona iray hafa tao anaty harona fanariam-pako.
Ny olana dia izao, manaraka mora foana ireo olona itokiany ny ankizy. Maro amin’ireo mponina efa ho telo tapitrisa eto amin’ny nosy no midradradradra noho ity sangy mihoatra ny loha taterina mazàna saiky isan’andro amin’ny gazetin-dry zareo ity. Mihorohoro izy ireo, tsy mahalala hoe rahoviana no idonan’ity resaka “lian-drà” ity amin’ity ireo, sady tezitra mafy ihany koa amin’ny fahalemen’ny fanjakana, na tsy fandraisana andraikitra hoy ny sasany, mba ho fiarovana azy ireo. Lasa fitaovana fototra ho vonjy aina ho an’ny lehibe sy ny ankizy ny fitondràna fitaovam-piadiana afenina sy izay azo faritana ho toy izany, na eny an-dàlam-ben’ny tanàn-dehibe io na hatrany amin’ireny fonenana manamorona ny làlan-tany mamovoka eny ambanivohitra ireny, ny fahatapahan-kevitry ny olona hanao fitsaram-bahoaka avy hatrany.
Vantany vao hita ilay vatana mangatsiaka (izay noheverina fa ny an’i Dean), dia nanoratra i Porter :
Tatitra vaovao tamin’ireo gazety mpiseho isan’andro eto amin’ny nosy no nitondra antsipirihany ny zava-doza nitranga sy ny nandraisan’ny fianakaviana aryireo vavolombelona izany, ary koa tatitra momba ny antso an-telefaona voarain’ireo raiamandreny avy amin’ireo tsy mataho-tody mananihany mangataka takalo, na manome indice tsy mitondra mankaiza akory. Na dia efa dimampolo aza ireo ankizy no nisy namono hatramin’ny niandohan’ny taona, dia nilazàna ny rain’ny zaza fony izy nilàza ny tsy nahitàna azy, fa mila miandry 24 ora ny mpitandro filaminana alohan’ny hahafàhana milàza fa tena tsy hita tokoa izy sy handraisana ny andraikitra tandrify an’izay. Raha izao fironana amin’ny famonoana izao, dia tena maneho tsy firaharahàna mivandravandra mihitsy ity tsy fanatanterahana asa avy hatrany nataon’ny mpitandro filaminana ity, ho an’ny andro manaraka, efa nadio ny rano nitàn’ireo naka azy an-keriny.
Fahoriana tsy hay lazaina no hololohavin’ny fianakavian’i Ananda mandritry ny volana maro ho avy, nefa indrisy, ho an’ireo vahoaka notefen’ny andro sy fotoana hanamafy fo hiatrika ny vokatry ny horohoro, afaka andro vitsy dia hiverina amin’ny nahazatra ho toy ny tsy nisy izany, mandra-pisian’izay sento iraisan’ny mpiara-monina indray ateraky ny setrasetra tsy hay faritana.
Ranomaso no nameno ny masoko teo ampijerena ny sarin’i Nordia Campbell, renin’i Ananda Dean 11 taona, tanatin’izay hoe tena tebiteby làlina. Angamba vao avy nijery maso ny sisa tamin’ny zanany vavy nampakarina avy any anaty hantsana izy ary tena tsy hay nampiononina. Iza no tsy ho toy izany? Tsy ho adinoko mandrakizay izay sary izay, izay hirifiry izay.
Toa tsy misy fiafaràna tsinjo mihitsy ity firongatry ny herisetra ifanaovantsika samy olombelona ity. Hanàisotra ny ain’ankizy iray tsy manantsiny ho takalon’ny karatra hamahànana telefona? Andriamanitra ô! Tena efa lavitry ny mampalahelo sy ny mahaketraka. Isan’ireo zavatra tena tokony hijoroan’ny governemanta itony ary tsy ho fanehoan-kevitra fotsiny fa tena firotsàhana manao asa mihitsy. Inona no andrasana hitranga vao handray fepetra hitondra fiovana goavana?
Raha mbola tsy nisava tsara akory ny sain’i Stunner mikasika ny zavatra mampihoron-koditra manodidina ity fahafatesan-jaza ity dia efa nahare sombim_baovao ratsy sahady izy:
Tsy nanam-potoana hisentoana sy hakàna aina akory ny firenena alohan’ny dona hafa … ZAZA iray VAO SIVY (9) VOLANA MONJA…no nanaovana herisetra sy novonoina. Ny fieritreretana fotsiny hoe zaza tanora miharitra habibiana toy izany dia efa mampanotika hatrany anaty tsokan-damosiko ary mandrehitra hatezerana ato amiko! Tsy tokony hitranga mihitsy ny fihetsika toy izany! Amin’ny fomba ahoana no hisian’izany aty anatin’ny fiaraha-monintsika e? Ahoana no hamelàn’ny olona ny zavatra toy izany ho vaky masoandro ao ambany tafon-tranony?
Tafakatra ho 57 ankehitriny ny isan’ny ankizy maty nefa ny taona tsy mbola mifàrana … raha io no fototra iaingàna dia afaka manomana sahady ny saintsika isika fa mbola be no ho sisa amin’ny zavatra mahavaky fo tahaka ireny. Toa sahala amin’ny tsy misy na inona na inona atao mba hampitsahàrana ity vono olona ity. Sa kosa tena tsy misy na inona na inona azo atao mihitsy tokoa hampitsaharana azy ity?
Mila manamafy kokoa ny fitandremany ny raiamandreny indrindra fa rehefa mikasika ny zanany, ilaina ho mpiaro sy hampianatra ny zanany mba ho mailo manoloana ny vahiny dieny mbola kely izy ireny. Nefa ny raiamandreny tsy ho afaka ny ho eo anilan’ny zanany mandrakariva, ary ny fanomànana sy ny fampianarana raiamandreny iray tsy midika avy hatrany fa ho voaàro ny zaza. Mànana ny anjara toerany ny mpitandro filaminana, ny sekoly mànana ny anjara asany, ny governemanta tokony hametraka izay fanovàn-dalàna tokony hatao sy hampihatra ny lalàna, ary ny fiaraha-monina koa dia tokony hanao andrimaso ireny zanatsika ireny. Mety tsy hanafoana ny zava-doza izay, nefa angamba mba hampihena ny fitrangan’ny famonoana ny tanorantsika.